Wasiirka Maaliyadda & Duqa Muqdisho oo saxiixay Heshiis lagu dhisayo Muqdisho iyo 3 Magaalo oo kale. (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Heshiis lagu dhisayo afar magaalo oo ay caasimadda ka mid tahay ayaa maanta lag saxiixay magaalada Muqdisho, iyadoo ay ku baxeyso lacag dhan lacag ka badan 100 Milyan oo Doolar.
Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Duaale Beyle, Wasiirka Howlaha Guud Casbdi Xasan Xooshow iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamud Filih ayaa si wadajir ah kala saxiixay heshiiskan oo la sheegay inay ku baxeyso lacag dhan 112 Milyan oo Doolar.
Magaalooyinka heshiiskan lagu dhisi doono ayaa kala ah: Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Garoowe, waxaana magaalada Muqdisho ay lacagtaasi ka heleysa 28-Milyan oo Doolar. Dhaqalaha ayaa waxaa bixinaya Bankiga adduunka waxayna hordhac u yihiin qorshaha deyn cafinta Somalia.
Previous articleAlshabaab oo weerar saacado qaatay ku qaaday Koontaroolada Degmada Afgooye & Wararkii ugu danbeeyay..
Next articleDEGDEG: Qarax weyn oo ka dhacay Afgooye iyo Wararkii ugu danbeeyay..